Nkpọrọgwụ: Olee otú iji mee ka ihe ntanetịime weebụ dị irè?
Ọkachamara scrapers web wepu data sitere na saịtị di iche iche na oge etiti kama ichikota ihe niile echere-data ozugbo. Ihe ntanye HTTP na-enye gị ohere iwepu ibe weebụ site na sava weebụ. Enwere juputara na ozi di omimi nke nwere ike iji mee ihe n'inwe ahia na ike isi.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ịnakọta data maka nchịkọta omume nke ndị ahịa na ọgụgụ isi azụmahịa, nchịkọta weebụ bụ ngwọta kasịnụ. Maka nbido ntanetị weebụ, nchịkọta weebụ bụ usoro nke inweta ma weghachite data site na weebụ na usoro ndị akọwapụtara nke a pụrụ nyochaa nke ọma.
Na ntuziaka nchịkọta a, ị ga-amụta otú e si eme ihe ntanetị weebụ. Rịba ama na ọkọlọtọ bụ asụsụ mmemme na ndị mmepe 'obodo nke na-enye gị ohere ịmepụta bara uru ngwaọrụ scraping weebụ . Nchịkọta weebụ bụ ohere maka ị gbasaa azụmahịa gị ma nyekwa ndị ahịa ihe ọmụma dị mkpa banyere ngwaahịa gị.
A na-egosipụta ihe ndị na-emerụ emerụ na nsogbu dị na ngalaba nkà na ụzụ. N'oge a, ị nwere ike ibudata ma chekwaa ọdịnaya site na ebe nrụọrụ weebụ site na iji smartphone gị. Dịka ọmụmaatụ, Instapaper bụ ihe nyocha ihuenyo pụrụ ịdabere na ya nke na-enye gị ohere idebe ihe ederede gị na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Nye ndị ahịa ego, Mint. com bụ ihe nchọgharị weebụ iji tụlee. Ngwá ọrụ a na-ahazi ma na-ahazi ahịa azụmahịa gị ma gosipụta data na nchịkọta na tebụl dị mma. Mint. com na enyere ndi ahia aka ichota ihe omuma ihe na ihe omuma.
Ịdebe ụkpụrụ omume na ntanetị weebụ
Ebe ntanetị na-emekarị ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ kwụsị adreesị IP gị. Ụfọdụ saịtị dị iche iche nwere "ntụziaka zuru ezu". Ntuziaka ndị a anaghị ekwe ka ndị na-ahụ maka weebụ wepụ ihe ndị a nke weebụsaịtị.
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke inweta data site na saịtị ndị ọzọ. Otú ọ dị, ịchọta ozi site na saịtị na ịdebe ọdịnaya na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ nke a na-ewere dị ka mmebi nke okwu na "izu ohi. "
Otu esi eme ka ntanetị weebụ
Gụpụta onye na-ewepụta ihe ọma - onye na-ewepụta ihe ga - enye gị ohere weghachite URL site na njikọ ndị ọzọ
iji gbochie mwepụ nke data ahụ karịa otu ugboro
Wụpụta HTTP Fetcher - The Fetcher na-arụ ọrụ iji weghachite ibe weebụ site na sava weebụ na-ezube
Hazie gị URL Queue Manager - Onye njikwa na-ebute ụzọ A ga - ekpochapụ URL na parsed
nchekwa data - Nke a bụ ebe a ga - eme ka ihe ọmụma dupuo maka nyocha na njikwa
ihe ntanetị weebụ na-ewepụ data sitere na ibe weebụ mgbe ọ na-ahụ ọrụ na arụmọrụ ya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nchịkọta dị ukwuu, lee ihe ndị ọzọ dịka nkwukọrịta nkesa, De-duplication, na DNS kpebisie ike. Nhọrọ nke asụsụ mmemme gị dịkwa ọtụtụ. Akara ọtụtụ weebụ scrapers na-ahọrọ na-ekpochapụ na ebe nrụọrụ weebụ na Eke Ọgba.
Ịmepụta ihe ntanetị weebụ dị mfe. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ na ngwa ntinye akwụkwọ weebụ gị iji zere ikike nwebisiinka na ebe nrụọrụ weebụ na-ebelata n'ihi na ndị sava na-ebugharị. Jikwaa ma rụọ ọrụ ntanetị nke ọma site na ịlele ọtụtụ ọnụọgụ na ihe onwunwe. Jiri nkowa n'elu wee mee ihe ntanetị weebụ nke ga-eme ka nlekọta weebụ gị chọrọ Source .